Fiarovana amin'ny solika sy ny vokany - fomba hiarovana ny tenako
Ny fiarovana ankavanana
Raha vantany vao tonga mpandroba ianao
Ny fotoam-pialan-tsasatra dia fotoana fialan-tsasatra ary fahafahana lehibe hanaovana ny karazan'asa rehetra any ivelany. Ny tanora sy ny antitra dia tsy tokony hanadino ny hipetrahan'ny masoandro amin'ny alàlan'ny masoandro. Fa nahoana no tena ilaina ny fiarovana amin'ny solika, nahoana ianao no mila miaro ny hoditra amin'ny fipoahan'ny masoandro be loatra ary inona no fomba tsara indrindra hanaovana izany?
Tsy misy fiarovana amin'ny filentehan'ny masoandro sy ny vokany
Ny taratra UV ao amin'ny tara-masoandro dia manimba ny hoditra isaky ny mihantona ela loatra. Ankoatra ny zavatra hafa, dia mety hitera-doza mampihoron-koditra izany, izay mahatonga ny hoditra ho mora voan'ny tsindry.
Fiarovana amin'ny masoandro
Ary azo atao ihany koa ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po.
Tena mampidi-doza ny sunburn, saingy indrindra satria mety hiteraka fahasimban'ny fahasalamana maharitra izy ireo, toy ny homamiadan'ny hoditra.
Amin'ny fialan-tsasatra, mazava ho azy fa mora ny maka solifara, satria matetika izy no mazavazava fotsiny eny an-dalana.
Ankoatra izany, ny olona iray dia mahatsiaro fa azo atao ny maka ny solika eny amin'ny lanitra malalaka na amin'ny aloky ny ampahany. Ny fepetra fiarovana maharitra àry dia tsy maintsy ilaina rehefa mandeha mankany amin'ny firenena mafana. Ny fomba mora hiarovana ny tenanao amin'ny masoandro dia ny mitafy akanjo feno akanjo.
Fiarovana amin'ny masoandro ny zava-dehibe
Satria tsy mahafinaritra foana ny hafanana mafana, dia tokony ho toy ny fahazavana sy rivotra mety ho azo atao izany. Tsy mahasalama anao izany rehefa mihetsika kely ianao. Ny hatsaratry ny masoandro dia ao anatin'ny efitra fatoriana na koa alika hafa.
Mitondrà akanjo, bengy na bikini, fa tokony hijery masoandro amin'ny loko, izay manana SPF ambony. Na ny akanjo lava na malefaka dia tsy tokony hohadinoinao na oviana na oviana ny solomaso sasao, mba hiarovana ny maso amin'ny taratra tafahoatra. Raha manaraka ireo fitsipika tsotra ireo ianao dia afaka mandeha fialan-tsasatra izao!
Raha mena ny hoditra toy ny lobolin-tsetroka, fantatrao fa efa ela loatra ianao no teo amin'ny masoandro. Inona àry no tokony hatao raha nokapohinao indray mandeha ianao ary ny hoditra dia mirehitra sy mihinana? Mamono mofomamy sy menaka manitra ary manampy amin'ny fahasitranan'ny hoditra.
Sunburn mametra ny fifaliana amin'ny andro fety
Matetika ny vokatra misy aloe vera na rameva dia atolotra. Ny fanampiana tsara indrindra, dia miankina amin'ny karazana hoditra, ka izany no mety ho tombony ho an'ny matavy kokoa amin'ny faritra. Ny tsara indrindra ho an'ny fanamaivanana fanaintainana, dia fantsona voadio na diplaoma. Ankoatra izany, tokony hisotro be loatra ianao mba hanamaivana ny hoditra voatsinjara.
Noho ny solomaso mafana sy mafy dia tsara ny manala fanafody manohitra ny fanafody avy amin'ny dokotera. Ny fitsaboana tokantrano dia ankatoavina amin'ny ankapobeny. Matetika izy io no manoro hevitra ny hanararaotra ny Quark amin'ny faritra voakasika mandritra ny solika.
Na dia mahafinaritra aza izany fantsona mahafinaritra izany, saingy mety hitarika amin'ny aretina na fihetsika tsy dia mahazatra noho ny bakteria efa misy, izay vao mainka miharatsy ny toe-javatra.
Sary fanangonan-tsary erotika - Selfie eo anoloan'ny fitaratra
Nahoana isika no maneso amin'ny fanirian-dratsy?